NJEHIE 3014 NA ITUNES MGBE EMELITE - ITUNES - 2019
Na-achọ ihe ntụrụndụ nke ọgụgụ isi, ma ọ bụ na ị maghị otú agafe oge? Gbalịa dozie ihe mgbagwoju anya. Ọ bụ ihe na-akpali akpali na nke bara uru. Crosswords na-ewu ewu n'ọtụtụ mba - ndị na-eto eto na ọrụ niile na-atọ ha ụtọ.
Iji mepee ihe mgbagwoju anya gị na ọkwa ọkachamara, ị nwere ike iji ọrụ ahụ. CrossMaster.
Ụdị crosswords dị iche iche
CrossMaster na-enye ikike iji ụdị crosswords dị iche iche - kpochapụ, linear, linear na ilu, fillvord, okirikiri, skanvord, cyclokrossvord na ndị ọzọ.
Maka nchịkọta nke skanvorda, usoro ihe a na-enye ụfọdụ ntọala. Ntọala ndị a gụnyere nhọrọ nke nhazi nhazi, nhazi nhazi, ntinye foto, yana okwu kachasị ogologo maka okwu.
Ndebanye aha faịlụ
Na ntọala mmemme, ị nwere ike ịgbanwe okpukpu nke uzo na akụ, gbanwee nha na ọdịdị nke mkpụrụ ndụ, yana iji ederede dị iche na ederede. Ọzọkwa tinye agba nke windo, mkpụrụ ndụ, uzo na akụ.
Zọpụta ọrụ a rụzuru na RTF na WMF.
Akwụkwọ ọkọwa okwu ahụ nwere nnukwu okwu 40,000 (okwu na-akọwa ya). E nwere uru bara uru maka edezi ma jikọọ akwụkwọ ọkọwa okwu gị.
Uru nke usoro ihe omume CrossMaster:
1. Ụdị crosswords dị iche iche;
2. Nhọrọ ndị ọzọ maka mgbazi;
3. E nwere akwụkwọ ọkọwa okwu na-ede akwụkwọ na onye ọrụ.
1. Mmachibido iwu n'ihi nsụgharị ngosi (ọ dịghị akwụkwọ ọkọwa okwu na akọwapụta ha, ọ dịghị ọrụ nlele anya).
Usoro ihe omume ahụ CrossMaster na-enye gị ohere ịbawanye ọsọ nke ịbịaru okwu mkparịta ụka ma melite ogo ọrụ. Ị nwere ike ịmepụta ọrụ ị rụzuru na ụdị pụrụ iche.
Download mbipụta CrossMaster
Onye na-eme mkparịta ụka Crossword Crossword mgbagwoju anya software Decalion Chọta EasyRecovery
CrossMaster bụ ngwá ọrụ dị mgbagwoju anya maka ịmepụta mgbagwoju anya na scanwords na ike ịmepụta akwụkwọ ọkọwa okwu cyclic ma họrọ ọkwa nke mgbagwoju anya.
System: Windows 7, 8, 8.1, 10, 2003, 2008, XP, Vista
Onye Mmepụta: Alexander Saltykov
Ọnụ: $ 24